राजमार्ग ... वाक्यांश कसरी सामान्य छ! हामी यो छ के सबै सजग छन्, तर अक्सर राजमार्गहरु, तिनीहरूलाई यात्रा गर्न र कति राजमार्गहरू रूस छन् अनुमति संग जो गति के हो थाहा छैन। गरेको राजमार्गहरु, आफ्नो वर्तमान र भविष्य को उद्भव को इतिहास हेरौं।
पहिलो उच्च गतिको राजमार्ग इटाली अन्तिम शताब्दीको सुरुमा देखियो। मिलान र Varese - 1924 मा, त्यो प्रत्येक अन्य दुई प्रमुख शहर संग साथ दिए। सडक लम्बाई 85 मी थियो। चाखलाग्दो कुरा, त्यो शब्द "राजमार्ग" को धेरै प्रयोग इटाली आए। को XXI सताब्दी को शुरुवात गरेर, देश expressways को 6,000 भन्दा बढी किलोमिटर निर्माण गरेको छ।
"Autobahn" - - सडक अर्को चिरपरिचित नाम जर्मनी मा देखियो। 1932 मा, राजमार्ग यसको लम्बाइ केवल 20 किमी थियो, कोलोन र बन जडान। रोचक तथ्य: जर्मनी, उच्च गतिको राजमार्ग को 3,500 भन्दा बढी किलोमिटर 1941 अघि निर्माण गरेका थिए। अब समय बाटोको निम्ति को 13,000 भन्दा बढी किलोमिटर छन्।
मिति, उच्च गतिको राजमार्ग - यो सबैभन्दा दुनिया सडक प्रकार मा प्रयोग भएको छ। यस्तो ट्रयाक निर्माण मा स्थिति अग्रणी चीन छ। 2015 को शुरुवात को लम्बाइ लगभग 112 000 मी राशि।
रूस मा, उच्च गतिको सडक निर्माण फिर्ता सोभियत पल्ट तिथिहरु। दुर्भाग्यवश, राजमार्ग संख्या सम्भव छैन गणना गर्न निर्माण। मूलतः रूस मा राजमार्ग गति - छापिएको सडक को अलग खण्डहरू छन्।
जो मार्ग रूस गति हुन मानिन्छ? राजमार्ग - केही यातायात चिन्ह भएको सडक, दुवै दिशामा धेरै सडक खण्डहरू भएको विशेष सुरक्षा वा विभाजन पट्टी संग अलग। यो सडक (कुनै पनि चौबाटोको मात्र पुल वा बाटो मुन्तिरबाट गएको अर्को बाटो मा सम्भव छ) एउटै स्तरमा अन्य कुनै चौबाटोहरु छ।
राजमार्ग मा पैदल, जनावर, गाडी सबै प्रकारका को आन्दोलन निषेधित, अधिक छैन गति 40 किमी / एच। यी साइकिल, मोपेड, ट्रयाक्टर र कुनै पनि अन्य आत्म-चालित वाहन समावेश गर्नुहोस्। यो पनि अस्वीकार्य छ सार्वजनिक परिवहन गर्न र को लागि यात्री कार र ट्रक छैन पार्किङ लागि डिजाइन छैन ठाउँमा रोक्न दिनुभयो।
यो एक यू-टर्न बनाउन र अलग पट्टी reversing र प्रशिक्षण ड्राइभिङ अस्वीकार्य छ अंतराल प्रविष्ट गर्न निषेधित छ। त्यसैले, राजमार्ग छोडेर नियमहरूमा तोड्न होसियार हुन।
रूस मा मुख्य सडक मास्को मा सुरु। यो सडक अधिकांश रूसी साम्राज्यको समयमा निर्माण र आधुनिक आवश्यकताहरु लागि परिवर्तित कि सुझाव। देशको उच्चतम युरोपेली भाग यसको नेटवर्क को घनत्व। मुख्य सडक मास्को देखि radiate। तपाईं जाने थप उत्तर सडक को नेटवर्क कम-विकास गरे। सुदूर पूर्वी र साइबेरियन संघीय जिल्लामा थुप्रै सडक प्रमुख सडकों जोडिएको छैन। व्यक्तिगत शहर सन्देश मात्र सम्भव भएको गर्मी मा त केवल हावा हो, र।
984 000 मी - रूसी सडक 1,396 लाख मी को कुल लम्बाइ र एक कठिन कोटिंग भइरहेको छ। व्यवस्था संग अनुसार सडक को वर्गीकरण मा तिनीहरूले राज्य मात्र होइन विभिन्न विभाग र सम्पत्ति को वस्तुहरू छन्, तर पनि रूसी संघ को कार्यालय, साथै व्यक्तिहरूलाई हुन सक्छ। यी, संघीय क्षेत्रीय र नगरपालिका, स्थानीय मान को मार्ग समावेश गर्नुहोस्। साथै, निजी सडक छन्।
संघीय सडक ठोस वेब र गति हुन सक्छ। रूसी सरकार द्वारा अनुमोदित सूची, तिनीहरूले राज्य सम्पत्ति हो। एक निश्चित नम्बर पत्र अगाडि खडा यस्तो सडक। संघीय यी कुन लागू हुन्छ?
मास्को - - छिमेकी देशहरूको क्यापिटल, साथै रूसी संघ को प्रशासनिक केन्द्र संग पहिले, यो रूस को राजधानी जडान सबै सडक छ। यस्तो ट्रेल्स "एम" उपसर्ग गर्नुपर्छ, यी समावेश:
- M1 "बेलारुस" - "मिन्स्क राजमार्ग" - मास्को र रूस लिङ्क बेलारुस मा सीमा।
- M2 "क्रिमीआ" - मास्को, टुला र Kharkov संग युरोपेली मार्ग E105 एकजुट गर्न।
- M5 "यूराल" - 1879 मी को सबैभन्दा ठूलो लम्बाइ भएको र चेल्याबिन्स्क गर्न मास्को जडान हुनेछ।
दोश्रो, यो आफूलाई बीच अलग प्रशासनिक केन्द्र जडान सडक छ। तिनीहरूले एक "पी" उपसर्ग छ:
- P22 "कैस्पियन" - 1381 मी को लम्बाइ भएको सबैभन्दा लामो क्षेत्रीय सडक को एक। यो मास्को, तामबोभ, बेलग्रेड र Astrakhan मार्फत चल्छ जो युरोपेली मार्ग E119, भाग हो।
- P504 "Kolyma" - 2000 भन्दा बढी मी को लम्बाइ। एक प्रमुख राजमार्गहरू सुदूर पूर्व छ। यो मागाडान गर्न याकुत्स्क देखि बित्दै।
तेस्रो, - पहुँच र जडान अन्य परिवहन नोड्स संग समुद्र वा नदी बंदरगाह, हवाई वा रेलवे स्टेशन, संग साथै शहर जडान गर्न सक्नुहुन्छ कि बाटो। "एक" तिनीहरूले सबै उपसर्ग पहिचान छन्।
जनवरी 1 मा, 2018 नयाँ शक्ति मा आउनेछ रूसी संघीय सडक को सूची। त्यहाँ ट्रंक मार्गहरू, र अरूलाई कुनै विभाजन हुनेछ। परिवर्तनहरू पनि नम्बर र सडक को नाम प्रभावित। निकट भविष्यमा राजमार्ग मा गति कम्तिमा 130 मी / घन्टा हुनेछ।
सडक "मास्को - Noginsk"
मास्को Noginsk दूरी मात्र 58 किमी छ। आज यसरी व्लादिमीर, Nizhny Novgorod, कजान, ऊफा र अन्त्य मार्फत मस्को बाट stretching, राजमार्ग M7 "वोल्गा" साथ चल्छ। सडक एक संघीय महत्त्व छ। त्यो यसलाई देखि प्रति दिन37 हजार कार पारित गर्न सक्छ अब यो छ, उच्च क्षमता घमण्ड गर्न सक्दैन। यस कारण, त्यहाँ अक्सर ट्राफिक जाम र भीड मास्को गर्न प्रवेश छन्।
बढती सरकार आन्दोलन को दृश्य मा ठाँउ नयाँ राजमार्गहरू "मास्को-Noginsk" राख्न निर्णय गरे। यो सडक पनि M7 लागि वैकल्पिक छ र भुक्तानी गरिनेछ।
टोल राजमार्गहरू यसलाई अब पालो छ र रूस गर्न, विकसित देशहरूमा धेरै लोकप्रिय बनेका छन्। परियोजना 2014 मा सुरु, 2017 को लागि निर्धारित अन्तिम कमीशन। यो सडक मुख्य लाइन राहत मदत गर्नेछ र Noginsk वसोवास 20-30 मिनेट लागि राजधानी यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ छ। यो मान्छे मास्को मा काम को लागि एक ठूलो मद्दत हुनेछ।
टोल सडक "मास्को - Noginsk" प्रति दिन 30,000 वाहनहरु को क्षमता हुनेछ। एउटै दिशा र गति देखि 120 मी / घन्टा मा6लेन संग, राजमार्ग यात्रा गर्न र ड्राइभर लागि सान्त्वना विस्तार गर्न समय कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यो मार्ग लागि भाडा अझै ज्ञात छ - वा यसलाई तय गरिने वा लाभ निर्भर हुनेछ। क्षणमा, सानो कोष कारण मात्र आंशिक एक्सप्रेस निर्माण गरिएको छ।
मार्ग "मास्को - सेन्ट पीटर्सबर्ग"
क्षणमा, सेन्ट पीटर्सबर्ग र मास्को को M10 संघीय राजमार्ग E105 "रूस", को XIX सताब्दी मा सञ्चालन हालिदिए मिलती। दुई क्यापिटल पत्रुस म योजना र एउटा जगेडा पानी सिस्टम सन्देशहरू भएको छ जो परियोजना, बाहिर थियो बीच जडान छैन। 706 मी को आज सडक लम्बाई। कारण यो मार्गमा सानो क्षमता र कम गति अक्सर भीड छ। 130-170 हजार कार गर्न राजमार्ग सवारी, र 10 मी / घन्टा गर्न मास्को गर्न प्रवेश मा गति मा राति। M11 - यो दृश्य केही वर्ष पहिले एक राजमार्ग "सेन्ट पीटर्सबर्ग मास्को" निर्माण गर्न एक परियोजना थियो।
सडक "मास्को - सेन्ट पीटर्सबर्ग" आंशिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ। यसको लम्बाइ 684 किमी हुनेछ, र यो आज वास्तवमा विद्यमान M10 राजमार्ग प्रतिस्थापन गर्नेछ। अपरेसन राजमार्ग 2018 मा योजना छ हालिदिए। मिति, धेरै क्षेत्रमा निर्माण: Solnechnogorsk गर्न मास्को देखि 15 58 किमि र 258 द्वारा 334 मी - Vyshny Volochek बाइपास मा Tver क्षेत्रमा।
चित्रहरू सिर्जना गर्दा राजमार्ग खाता climatic अवस्था मा लिन हुनेछ। संक्रमणकालीन कन्टिनेन्टल समुद्र - मास्को र Tver फरक समशीतोष्ण कन्टिनेन्टल, र नोभगोरोड र Leningrad: चार क्षेत्रहरु निशान द्वारा पार, फरक जलवायु छ। तापमान मा अचानक सबै परिवर्तनहरू नराम्ररी सडक सतह असर गर्न सक्छ, र जीर्णता मा बर्बाद स्रोतहरू परिणाम। तसर्थ, फर्श को विकल्प गर्न दृष्टिकोण धेरै गम्भीर हुनुपर्छ। यसबाट सडक भविष्य निर्भर गर्दछ।
राजमार्ग "मास्को - सेन्ट पीटर्सबर्ग" प्रत्येक दिशा र 150 मी / घन्टा गति मा25 लेन देखि हुनेछ। यो एकदम शहर बीच यात्रा समय कम र ड्राइभर लागि अवस्था सुधार हुनेछ। यो लाइन मा यात्रा को अनुमानित लागत बारे 1,200 rubles हुनेछ। सबै दिनको समय र मार्ग को एक निश्चित खण्ड निर्भर हुनेछ। तसर्थ, सडक "मास्को - सेन्ट - पीटर्सबर्ग" रूस मा दोस्रो टोल मोटरबाटो हुनेछ। यो तलब सडकको लगभग 60% निर्माण अन्तर्गत छ हुनेछ स्पष्ट गर्न आवश्यक छ, र तपाईं शुल्क र हालको राजमार्ग M10 मुक्त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
"मास्को - बेइजिङ" - भविष्यमा हेर्न
पूर्व लिङ्क गर्न सपना र पश्चिम सधैं enterprising मान्छे को मन मा kindled छ। मिति, मास्को र बेइजिङ जडान राजमार्ग निर्माण, सम्भव छ। "- बेइजिङ मास्को" 2014 मा, एक ज्ञापन पत्र उच्च गतिको रेलवे निर्माण गर्न रूस र चीन बीच हस्ताक्षर भएको थियो।
आज, दुई देशहरू जडान रेल, 130 घण्टा सडक मा छ - कि6दिन हो। एक परियोजना लागू गर्दा बेइजिङ देखि 350 मी / घन्टा एक गति मा 7000 मी को दूरी विजयी, दुई दिनमा सम्भव हुनेछ मास्को प्राप्त गर्न। चिनियाँ रेलवे संग सहयोग चीन र रूस दुवै को स्थिर आर्थिक विकास हुनेछ, साथै युरोप र एशिया बीच राम्रो जडान रूपमा सेवा गर्छन्।
साथै, सडक "मास्को - बेइजिङ" को यूराल संघीय जिल्ला विकास गर्न योगदान गर्नेछ। उहाँले यस्तो शहर मा स्टेशन सामेल: कजान, येकाटिरिनबर्ग, चेल्याबिन्स्क, र त्यसपछि - अस्ताना (काजाकिस्तान), उरुम्की र बेइजिङ। मुख्य र प्राथमिक कार्य उच्च गतिको राजमार्ग मास्को र कजान जडान छ। यो अन्त गर्न, चीन यसको प्रविधि प्रदान गर्नेछ र लगानी हुनेछ $ 10 अर्ब। यो 2030 द्वारा परियोजना पूरा गर्न योजना छ।
"मास्को - कजान" - नयाँ दर
राजमार्ग "मास्को - कजान" यो सम्भव भएको निवास समय बाटो मा 3.5 घण्टा कम गर्न गर्नेछ। येकाटिरिनबर्ग आफ्नो थप विस्तार 8 घण्टामा 1595 मी को एक दूरी कवर गर्न अनुमति दिन्छ। अप गर्न 400 मी / घन्टा मार्ग मा उच्च गतिको रेल को योजना आन्दोलन। द्रुत क्षेत्रीय रेल को 200 मी / घन्टा एक गति मा 200 किमी को दूरी मा पालन गर्नेछन्।
राजमार्ग मा एकै रातमा लामो-हउल रेल, साथै कार्गो र कन्टेनर यातायात त्वरित समावेश गर्न योजना छ। गति तथ्याङ्कले 160 मी / घन्टा छन्। 2018 मा योजना छ - "कजान मास्को" को रेलवे लाइन पूरा गर्नुहोस्। यसको निर्माण के हुनेछ? मुख्यतया जनसंख्याको लागि जब प्रदान गर्न। विशेषज्ञहरु यूराल मा सडकको निर्माण पुरा औद्योगिक जटिल revitalize मदत गर्नेछ तर्क। एक किलोमिटर रेलवे लाइन राम्रो रोडा को बारेमा 16 हजार घन मीटर, धेरै उच्च गुणवत्ता को प्रबलित ठोस संरचना को बारे मा 15 हजार टन, इस्पात को 125 टन र रेल वेब को 25 टन हुनेछ। विदेश यी सामाग्री खरीद लागि त्यसैले, उत्पादन प्रविधिको सुधार र आफ्नो गुणस्तर वृद्धि गर्न ठाउँ हुनुपर्छ, परियोजना लागत वृद्धि जो हुनेछ र पैसा को एक धेरै राशि, आवश्यक हुनेछ। स्थानीय कारोबार यो समस्या सामना र मान्छे काम धेरै वर्ष को लागि सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
"मास्को - डन"
संघीय राजमार्ग "मास्को - डन" M4, त्यसैले किनभने पछिल्लो शताब्दीको अन्त मा, नाम 1967 मा बनाइएको थियो। मार्ग Rostov-मा-डन गर्न वोरोनिश मार्फत राजधानी भाग्यो, र7मिटर चौडा दुई लेन थियो त्यतिबेला। प्रारम्भिक 1991 मा ट्रयाक द्वारा 500 मी विस्तार भएको थियो, र यसको अन्तिम गन्तव्य नोवोरोसीस्क थियो। त्यसैले आधुनिक सडक M4 "डन" विभिन्न क्षेत्रको अतिरिक्त द्वारा। यो एक चक्कर Hlevnoe गाउँ थियो र 20 किमी को एक लम्बाइ थियो कि एक बाटो संग पहिलो राजमार्ग टोल स्टेशन थियो रोचक छ।
आज राजमार्ग "मास्को - डन" रूस मा सबै भन्दा राम्रो छ। मात्र drawback को गर्मी मा एक र अन्य दिशा मा कार को पूर्ण छ भन्ने छ। मास्को गरेको उपनगर को धेरै र समुद्रलाई छुट्टी मा आफ्नो परिवार संग यात्रा। ट्रयाकको को क्रास्नोडार र Stavropol क्षेत्र, रोस्तोव Oblast र क्रिमीआ गर्न जान्छ। मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग रूस को दक्षिणी क्षेत्रहरु र देश को उत्तरी क्षेत्रका तरकारी र फल को एक किसिम द्वारा संचालित एकै समयमा फिर्ता।
अलग ट्रयाकको पहाड मार्फत बित्दै जहाँ, विशेष गरी क्रास्नोडार मा, सडक खण्डहरू, मे मा जाडो समयमा snowdrifts र बलियो बरफ। खराब मौसम केही दिनको लागि राजमार्ग ट्राफिक ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, केही दिन लागि Rostov क्षेत्रमा unrepaired क्षेत्र सडक सबै वाहन को आन्दोलन रोक्न 2009 मा तत्व।
अर्को समस्या - ट्राफिक जाम अक्सर टोल क्षेत्रको भुक्तानी केही समय लाग्नेछ रूप मा, मास्को क्षेत्रमा चौकियों मा आउँदैन।
धेरै राजमार्ग टोल स्टेशन मा, र यो निःशुल्क सडक भन्दा एक विशाल लाभ दिन्छ। पहिले, एक राजमार्ग मोड M4 को 130 मी / घन्टा खण्डहरू, र सबै भन्दा भाग - 110 मी / घन्टा। दोस्रो, यो दरमा यो एक ठूलो बाटोको निम्ति लगभग सबै सडक भन्दा छ आवश्यक छ, र यो छ। तेस्रो, भुक्तानी साइटहरूमा चालकहरुको लागि सेवा प्रवेश - आपतकालीन सहयोग। उत्कृष्ट विचार - मुसीबत संग भिडियो हरेक 1.5 मी साइन इन गर्नुहोस्। त्यहाँ एक ब्रेक वा ग्याँस सकिएको थियो भने, बस पहेलो बक्स प्राप्त, र तपाईंले चाँडै मद्दत गर्ने पक्का हो।
यसको इतिहास मा उच्च गतिको रेलवे लाइनहरु पछिल्लो शताब्दीमा गाडेको। एक प्रोटोटाइप जेट गाडिहरु - पनि सोभियत समयमा यस्तो कार रूपमा उच्च गतिको रेल, निर्माण गर्ने योजना थिए। आफ्नो परीक्षण 1970 मा भयो। अर्को एक विशेष उच्च गतिको सडक सिम्फरोपोल र Rostov-मा-डन गर्न शाखा संग Kharkov र Lozova संग मास्को जडान गर्ने थियो जो परियोजना, विकास भएको थियो। कि बाटोमा यात्रा गति 250 मी / घन्टा हुनुपर्छ।
दुर्भाग्यवश, सोभियत संघ पतन आर्थिक संकट गर्न नेतृत्व, र सबै योजना पनि टाढा विगतमा थिए। उच्च गतिको रेल विकास "Sokol-250" 2000 मा आफ्नो परीक्षण गर्न नेतृत्व, तर किनभने आयोग फेला कमीकमजोरी को, यो अपरेसन हालिदिए कहिल्यै भएको थियो। साथै, आफ्नै उच्च गतिको रोलिंग स्टक स्थापना लागत रेल परीक्षण पारित गरेको अनुज्ञेय सीमा पार, र यो युरोप मा अवस्थित पहिले नै किन्न सस्ता थियो।
JSC "रूसी रेल" र जर्मन कम्पनी Siemens बीच सम्झौता गति सक्षम गर्न 330 मी / घन्टा, 8 उच्च गतिको रेल को वितरण को लागि 2006 मा हस्ताक्षर भएको थियो। पहिलो रेल मार्ग मा उडान मा 2008 मा वितरण र बाँकी थियो "मास्को -। सेन्ट पीटर्सबर्ग" राजमार्ग - विश्वसनीय रेल प्राप्त गर्न "मास्को सेन्ट पीटर्सबर्ग"3घण्टा र 45 मिनेट मा दुई शहर बीचको दूरी समेट्छ।
अर्को उच्च गतिको रेल "- Nizhny Novgorod मास्को" मार्ग मा देखियो। यात्रा समय3घण्टा 55 मिनेट थियो। यो मार्ग मिड-2010 देखि यात्रु लागि खुला छ। 2010 को अन्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय महत्व उपलब्ध उच्च गतिको संचार भयो "सेन्ट पीटर्सबर्ग - हेलसिन्की"।
राजधानी को राजमार्ग
मास्को, कुनै पनि महानगरबारे जस्तै, वाहन संग Awash छ। अधिकांश मानिसहरू रिमोट ठाउँमा बस्ने वा जाने आफ्नो आफ्नै परिवहन मा किनमेल वा मनोरञ्जन लागि शहर मा काम गर्न। तर, दुर्भाग्यवश, पूर्वाधार निरन्तर सडक विस्तार गर्न अनुमति छैन। मास्को मा यो समस्या समाधान गर्न एक उच्च गतिको मोटरबाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरे। को XXI सताब्दी को शुरुवात "राजमार्गहरू" को अवधारणा अघि र विशेष महानगरबारे सीमाहरु भित्र अवस्थित छैन। नयाँ परियोजनाहरूको विकास शहर को केन्द्रीय सडकमा को 60% को परिवहन राहत हुनेछ।
एक आवश्यकताहरु को: उच्च गतिको राजमार्ग मास्को लिनुपर्छ आवासीय क्षेत्र टाढा र उच्च गति छ। यी समस्या समाधान गर्न, यो राजमार्ग बाहिर निकाल्छ संख्या कम गर्न निर्णय भएको थियो, र तिनीहरूलाई को कुनै पनि कुनै पनि किनमेल केन्द्र नेतृत्व गर्दैन। एक यस्तो सम्भव कदम अप गर्न 100 मी / घन्टा राजमार्ग मा गति बढाउन।
उत्तर-पूर्व, दक्षिण र उत्तर-पश्चिम: आज हामी तीन मार्गहरू को परियोजना बारे थाहा छ। सबै सडक परस्पर संग रिङ र संचार हुनेछ। यी पङ्क्ति (वा तार), को अधिकारीहरु अनुसार, चौथो परिवहन घन्टी प्रतिस्थापन गर्न। यो उद्देश्य लागि यो सडक चाडको को क्षेत्र मा घन्टी को उत्तर-पश्चिम र उत्तर-पूर्वी जडान गर्न योजना छ, र दक्षिण कर्ड को Krylatskoye जिल्ला उत्तर-पश्चिम पार हुनेछ। यो जडान मार्फत चालक शहर केन्द्र प्रवेश बिना शहर एक अन्त देखि अन्य यात्रा गर्न सक्षम हुनेछ।
ठूलो शहर को विश्वव्यापी यातायात समस्या राजमार्गहरू द्वारा हासिल छन्। राजमार्ग शहर को सरहद मा, एक चक्कर हो, र महानगरबारे केन्द्र अनावश्यक ट्राफिक मुक्त छोडने उठाएको पुल interchanges प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। मास्को मा परियोजना अनुसार यो कि कर्ड सार्वजनिक यातायात सेवा एकै समयमा, हस्तक्षेप हुँदैन योजना छ। यो आवासीय क्षेत्रको इन्टरसेक्ट, यी सडकहरू त राजमार्ग को मुख्य भाग माथि उठाएको हुन वा गर्नुपर्छ भूमिगत जाने हो।
राजमार्ग मा गति पनि, अझै अन्तिम तथ्याङ्कले छैन। विशेषज्ञहरु यस मुद्दा मा एक सहमतिका छैन आउँछन्। के गति शहरमा राजमार्ग मा अनुज्ञेय? अरूलाई सुरक्षा वृद्धि भने, गति 100 मी / घन्टा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर तर्क गर्दा, छैन 80 भन्दा बढी मी / घन्टा - केही विश्वास गर्छन्। अब, जानिन्छ, जस्तै स्तर शहर द्वारा अपनाए: गति भन्दा बढी हुन सक्दैन 60 किमी / एच।
राजमार्ग र रेल दुवै - रूस मा आज राजमार्गहरू को निर्माण मा परियोजनाहरूको धेरै तैनाथ। यो अर्थतन्त्रको विकास बारे बोल्छ र सारा रूपमा राज्य हितमा योगदान हुनेछ।
"मन्डारिन", एडलर। एडलर मा आराम: समीक्षा र फोटो
कार बीमा CASCO द्वारा
दवादारू "Femileks" (मोमबत्ती)। अमूर्त
Tarragon - घाँस उपयोगी र flavorful
के पेट वितरण अघि कम हुँदा, गर्भावस्था को समयमा हुन्छ
पहिलो grader लागि झोला कसरी चयन गर्न: फोकस गुणस्तर छ